India’s Mobile Operators Face $13 Bln Bill After Court Ruling | Myanmar Business Today
HomeMMBIZ NewsIndia’s Mobile Operators Face $13 Bln Bill After Court Ruling
Sankalp Phartiyal & Suchitra Mohanty (Reuters)
India’s top court on Thursday upheldademand by the country’s telecoms department that wireless carriers pay 920 billion rupees ($12.97 billion) in overdue levies and interest, sending their shares tumbling.
After the court decision, shares in Bharti Airtel dropped as much as 9.7%, while Vodafone Idea fell as much as 23%.
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဝိုင်ယာလက်ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသည့် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ရက်လွန်နေသော အခွန်များနှင့် အတိုးများ မပေးသောကြောင့် ရူပီး ၉၂၀ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ဒသမ၉၇ ဘီလီယံ) ပေးရမည်ဟူသော ဆက်သွယ်ဌာန၏ တောင်းဆိုချက်အား အိန္ဒိယတရားရုံးက အတည်ပြု အမိန့်ချလိုက်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အမိန့်ချလိုက်သောကြောင့် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ၏ ရှယ်ယာများမှာလည်း ဖရိုဖရဲဖြစ်ကုန်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဖြည့်စွက်ဝင်ငွေ၏ ၃-၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ဆက်သွယ်ရေး ဌာနသို့ ပေးရမည်ဖြစ်ကာ လိုင်စင်ကြေးအနေဖြင့် ဖြည့်စွက်ဝင်ငွေ၏ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဖြည့်စွက်ဝင်ငွေ (Adjusted Gross Revenue) ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအကြား အငြင်းပွားနေရသည်။ ကုမ္ပဏီများက AGR ဆိုသည်မှာ ပင်မ ဝန်ဆောင်မှုများမှ ရရှိသော ဝင်ငွေများသာ ပါသင့်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနကတော့ ဝင်ငွေအားလုံး ပါရမည်ဟု ဆိုသည်။
တရားရုံးက ထိုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်တွင် Bharti Airtel ရှိ ရှယ်ယာများမှာ ၉ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကျသွားပြီး Vodafone Idea ၏ ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများကတော့ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျသွားသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းမှာ မူလကတည်းက ငွေကြေးအကြပ်အတည်းနှင့် ကြုံနေရသည့် အိန္ဒိယရှိ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍအတွက် အထိအခိုက်များနိုင်ကြောင်း Vodafone Idea က ဆိုသည်။
Previous articleApple Starts Selling Locally Assembled iPhone XR in India
Next articleAirbnb Bets on Women Hosts, Millennial travelers for Growth in India